Immisa ayuu mar kale garoomada ka maqnaan doonaa Osman Dembele?
Xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Barcelona ee Ousmane Dembele ayaa mar kale dhaawacmay Kadib markii uu beddel ku soo galay qaybtii dambe ee kulankii Cadiz ee horyaalka La Liga. Xiddiga reer France ayaa baadhitaan maray shalay oo axad ah waxana la ogaaday in uu xiddiga soo gaadhay dhaawac Muruqa lugta Midig ah waxana uu garoomada ka maqnaan doonaa maalmaha soo socda. Wargayska AS ayaa sheegaya in uu Ousmane Dembele garoomada ka maqnaan doono muddo 2 ilaa 3 todobaad ah kadib dhaawacii soo gaadhay.
Isla wargayska ayaa sheegay in uu xiddigu seegi kulanka adag ee ay Barcelona la ciyaari doonto kooxda Juventus champions League. Warka 4aad: Waxa kulammo dhawr ah laga ciyaari doonaa horyaallada kala duwan ee Yurub, waxana ka mid ah horyaalka Ingiriiska ee PL oo caawa ay wada ciyaari doonaan kooxaha Brighton iyo Southampton. Dhanka kale waxa la ciyaari doonaa horyaalka Spain oo ay isku arki doonaan Valencia iyo Eibar. Sidoo kale waxa ciyaar adag oo ka tirsan horyaalka Talyaanigu ay dhex mari doontaa Fiorentina iyo Genoa.
In this article:football, Ousmane Dembele, Sports news
Horseed	 18 11	 5	 2	 38
Mogadishu City	 18 11	 5	 2	 38
Heegan	 18 9	 6	 3	 33
Raadsan S.C	 18 9	 6	 3	 33
Dekeddaha FC	 18 6	 5	 7	 23
Midnimo	 18 7	 1	 10	 22
Gaadiidka	 18 6	 3	 9	 21
Jeenyo FC	 18 5	 5	 8	 20
Elman FC	 18 5	 2	 11	 17
Geeska-Africa FC	 18 1	 2	 15	 5
Top Goal Score League One
Khadiir Mustafe Maxamed
Aamiin xirsi cumar
Cabdiwaduud Cabdiqani Axmed
Aamiin Abdi Yuusuf
Xamse abdiqaadir axmed
Siciid Maxamed Jaamac
axmed cali nuur
Khaalid Xasan Abdi
Maxamed cali salebaan
Mustafe abdiqaadir maxamed
cabdicasiis axmed cabdilaahi
Ahdoon ahmed Hadliye
Copyright © 2021 As the Best Football APP, Somali score offers Predictions, Statistics, Live Scores, Results and Tips for all leagues and Somali Football such as World Cup, Somali Premier League and Premier League, Serie A and Bundesliga.